Inona no miandry an’i Hong Kong amin’ny 2021? · Global Voices teny Malagasy
Hoavy mbola matroka kokoa no hita manangasanga.
Voadika ny 12 Febroary 2021 3:00 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, polski, Ελληνικά, Français, Español, Nederlands, Deutsch, Português, عربي, English
Sary an'ny Stand News. Nampiasaina ambany fahazoandàlana.
Niteraka onjam-pahatairana manerana ny tanàna iray izay efa tsy mitsahatra mahazo vaovao ratsy ny fisamborana marobe atao an'ireo mpikatroka mafana fo sy mpanao pôlitika mpomba ny demaokrasia niseho vao haingana tao Hong Kong noho ny fandraisan'izy ireo anjara tanatin'ny fifidianana savaranonando.
Ireto misy fivoarana enina heverina fa hiseho amin'ity taona ity.
1. Fisamborana bebe kokoa
Nanomboka nikendry olona ivelan'ny ivon'ny hetsika mpomba ny demaokrasia ireo manampahefana, toy ireo izay nanome fanohanana vondrona na tambajotra manohitra ny governemanta.
Ny 14 Janoary, olona 11 no voasambotra rehefa voalaza ho nanampy 12 hafa hitsoaka any Taiwan tamin'ny alalan'ny sambokely haingam-pandeha ny volana Aogositra 2020. Voasakan'ny mpiambina ny morontsirak'i Shina io ezaka fitsoahana io, izay nisambotra sy niampanga azy 12 rehetra ho niampita sisintany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Nanome sazy an-tranomaizina 3 ka hatramin'ny 7 taona ho an'ny 10 tamin'izy ireo ny fitsarana tany amin'ny tanibe Shina tamin'ny Desambra, raha naverina tany Hong Kong kosa ny ankizy roa tsy ampy taona tao anatin'ilay vondrona.
Nilaza ny mpahay siansa pôlitika Simon Shen fa, koa satria efa mazava izao fa raisin'i Beijing ho mpanongam-panjakana izay rehetra fiarovana ny demaokrasia sy ny fahaleovantena, dia ny fanamelohana azy ireo no dingana manaraka mandeha ho azy:
Izay fikambanana mivaingana na virtoaly, na koa olona miaro ny demaokrasia, izay vondrona matihanina rehetra (mpisolovava, mpitana kaonty, mpiasa sôsialy, na ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana koa aza) izay manome fanohanana ilay hetsika, izay sehatra fizaram-baovao (haino aman-jery, media an-tserasera, sehatra fiadian-kevitra an-tserasera, sns.) dia ho lasibatry ny famoretana. Tsy maintsy ataon'izy ireo izay hampitsimbadika ambony ambany ny fiarahamonina mahazatra ao Hong Kong mba hamitany ny tetikasany faharoa ho fampitambarana.
Rehefa mitsimbadika ambony ambany ny akanim-borona, ho vaky avokoa ny atody. Fotoana sisa no andrasana mialoha ny fisamborana.
2. Fanakanana vohikala
Ny 14 Janoary, nanamarina tamin'ny Stand News ny Hong Kong Broadband Network fa nahazo fangatahana avy amin'ny pôlisin'i Hong Kong izy hanidiana ny vohikala fampiantranoana any ivelany, hkchronicles.com.
Nanaja ny baiko ireo ISP ary nanakana ny fidirana amin'ilay vohikala, izay manangona ny lisitr'ireo raharaha momba ny demaokrasia sy ireo tantara ary sary maneho ny herisetra nataon'ny mpitandro filaminana nandritra ireo hetsipanoherana momba ny demaokrasia tamin'ny 2009. Mamoaka ny mombamomba ireo mpitandro filaminana voasaringotra anatina hetsika mahery setra ihany koa ilay vohikala.
Nandritra ireo hetsika fanoherana ny fampodiana olo-meloka tamin'ny 2009, nameno fangatahana didy vonjimaika ho an'ny Fitsarana Ambony ny mpitantsoratry ny fitsarana ao Hong Kong mandrara ny olona tsy hamoaka na hamerina hamoaka “vaovao izay mampiroborobo ny herisetra”, anatin'izany ny ao amin'ny sehatra fiadian-kevitra anaty aterineto LIHKG sy ny fampiharana fandefasana simaiso Telegram. Tsy nanohy ny fanakanana ireo vohikala ireo moa ny pôlisy avy eo.
Izao, anefa, nanome ny fotodrafitrasa ara-dalàna ho an'ireo manampahefana ny lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena mba hanakanan'ireto farany ireo vohikala misy mampiantrano any ivelany, ary inoana fa hampiasa tsara io fahefana io ny governemanta.
3. Tandindonin-doza ny fahaleovantena ara-pitsarana
Lasa farany amin'ireo fotodrafitrasa fiarovana ny olompirenana amin'ny fisamborana mitanila eo ambanin'ny lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena ny rafi-pitsarana iombonan'i Hong Kong. Kanefa, iharan'ny fanenjehana ny fahaleovantena ara-pitsarana satria manindry ny hanaovana fanavaozana ny resaka lalàna izay hanova ny famaritana ny fahaleovantena ara-pitsarana ilay mpanao lalàna mpomba an'i Beijing Tam Yiu-chung, izay miasa ao amin'ny kaomity maharitra ao amin'ny Kaongresy Nasionalim-bahoaka.
Tanatinà fanehoankevitra nivoaka vao haingana tao amin'ny Gazetiboky Bauhinia, nilaza ny Tam, gazetiboky iray mifandray amin'ny Biraon'ny Fifandraisana amin'i Beijing ao Hong Kong:
Tokony hoe “fahefana ara-pitsarana mahaleo tena” no dikan'ny fahaleovantena ara-pitsarana fa tsy hoe fahaleovantenan'ny fitsaràna. Saingy, nisy olona nanova ny dikan'ny “fahaleovantena ara-pitsarana, ny “fahefana ara-pitsarana” na koa ny “fahaleovantena amin'ny fitsarana” ho fahaleovantena ara-pitsarana tsy voafehy, tsy misy lalàna sy tsy voara-maso.
Tanteraky ny Lalàna mifehy ny Fiarovam-pirenena amin'ny ampahany ny toedraharaha izay hanaraha-maso ny fitsaràna, araka ny fahitan'ny Tam, izay manome alalana ny Lehibe Mpanatanteraka hanendry ireo mpitsara hisahana ireo raharaha mifandray amin'izany.
4. Sivana ara-pôlitika sy famerenana mamaritra ny zon'ny olompirenena
Ny 12 Janoary, nanonta tantara ny Reuters ary manonona loharano tsy nitonona anarana avy ao Beijing milaza fa mety hiatrika fanavaozana ny rafi-pifidianana ao Hong Kong atsy ho atsy mba hampihenàna ny fandraisana anjaran'ireo antoko mpomba ny demaokrasia anatin'ireo fifidianana ho avy.
Lau Siu-kai, izay filoha lefitry ny Fikambanana Shinoa Fandalinana ny ao Hong Kong sy Makaô, vondrona tranon-kevitra iray sangany ao Hong Kong, dia efa mihevitra mialoha ny hanao izay hahazoany antoka hoe ireo “tia tanindrazana irery ihany izay tia an'i Hong Kong” no hiatrika ny fifidianana, hisy manampahefana mety hapetraka hisafidy mangingina izay ho kandidà. Milaza koa izy fa ao anatin'ny fotoana maharitra, mety ho raràn'i Beijing tsy ho afaka hifidy ireo teratany avy ao Hong Kong tsy mizaka zom-pirenena shinoa.
Araka ny lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena, tsy ilain'ny pôlisy ny maka fanomezandàlana avy amin'ny fitsaràna raha hipaingotra ny fifandraisan'ireo olom-pirenena araka izay voafaritry ny Didimpitondràna momba ny Fifandraisana sy ny Fanarahamaso. Ny ankolafy mpomba ny demaokrasia ao Hong Kong dia manahy sao noho ny tanjona ara-pôlitika, ho henoin'ny pôlisy ny fifandraisan'izy ireo.
5. Fanakendana ny fitadiavana famatsiana eny ifotony
Antson'ireo pôlitisiàna mpomba an'i Beijing ny pôlisy mba hanao fanadihadiana momba ireo hetsika fanangonambola eny ifotony atao mba hanohanana ireo mpanao hetsipanoherana sy mpomba ny demaokrasia amin'ny ankapobeny.
Araka ny tantara iray tao amin'ny Inmediahk, famoahambaovaon'ireo olompirenena ao an-toerana, nangatahan'ilay mpanao lalàna mpiandany amin'i Beijing, Elizabeth Quat, ny sekreteran'ny governemanta misahana ny fiarovana, John Lee, mba hampanao fanadihadiana mavitrika an'ireny toerana ireny. Ilay mpiray antoko aminy, Holden Chow Ho-ding, koa dia nanondro ny “612 Humanitarian Fund” noho ny fanohanany ara-bola an'ireo olona voasambotra, naratra na norahonana hiharan'ny herisetra nandritra ireo hetsipanoherana ny fampodiana olo-meloka.
Noho ilay lalàna momba ny fiarovam-pirenena, mandritra ny fotoana anaovana fanadihadiana dia ananan'ny pôlisy ny fahefana hangihy ny fananan'izay ahiahiana. Araka izany, na atao hoe tsy nitory ilay tahirimbola na ilay ONG noahiahiana tamin'ireny raharaha ireny aza ny pôlisy nony farany, mety tsy maintsy nampitsahatra ny asany izy ireny nandritra ny fanenjehana an-dry zareo.
6. Lalàna manohitra ny fandisoana vaovao
Efa hatry ny ela ireo pôlitisiàna mpomba an'i Beijing no nandresy lahatra hanaovana lalàna manohitra ny fandisoana vaovao. Amin'izao fotoana izao, ifantohan'ny governemanta ny fandinihana ireo “lesoka” ao anatin'ny lalàna mifehy ny tanàna, izay hahafahana manakana ny fanelezana famahanan-dalitra.
Tsy ela akory izay, notsindrian‘ny Sekretera misahana ny Atitany, Caspar Tsui, ny tokony hanisiana fiheverana ny fiarovam-pirenena sy ny filaminam-bahoaka any anatin'izay rehetra fanaovana lalàna vaovao:
Ny fampiharan'ny isambatan'olona ny zo ho afaka haneho hevitra an-kalalahana dia miaraka amin'ny adidy sy andraikitra manokana, ary araka izany dia misy fepetra voafaritry ny lalàna ilaina, ilaina amin'ny fanajana ny zo sy ny voninahitry ny hafa, na ny fiarovam-pirenena sy ny filaminam-bahoaka, na ny ara-pitondrantena.
Nokianin'i Chris Yeung, filohan'ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety ao Hong Kong, ilay tolokevitra:
Afaka mijery toerana marobe ianareo, toa an'i Singaporo. Raha tsy ohatra angaha ka te-hàka tàhaka an'i Singaporo i Hong Kong, dia mazava be fa ny lalàna sasany milaza fa miady amin'ny fandisoana vaovao dia saika ampiharina betsaka amin'ny fanohintohinana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, mamadika azy ireny ho lasa famoretana pôlitika.
Amporisihan'i Singaporo ny governemanta mba hamaritra izay heverina ho fandisoana vaovao ao anatin'ny lalàna nataony hiadiana amin'ny vaovao diso. Mety higadra hatramin'ny folo taona mahery izay manitsakitsaka izany.